“Xanuunkii igu dhacay ayaa sababay aasaaska shirkadda aan $10 milyaan ka helo sannadkasta”Jules Miller | Gaaroodi News
“Xanuunkii igu dhacay ayaa sababay aasaaska shirkadda aan $10 milyaan ka helo sannadkasta”Jules Miller
October 24, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Jules Millerwaxay awowgeed la bilowday baaritaanka cuntooyiinka caafimaadka leh.
Jules Miller, waxa ay sameysay shirkadda lagu magacaabo The Nue Co, ee soo saarta cunnooyinka caafimaadka u fiican ama la isku caateeyo.
Jules Miller waxa ay sheegtay inay aad u xanuunsatay oo dhiig uu gudaha jirkeeda ku daatay.
“Waan baaba’ay, oo nolol caadi ah kuma aanan nolayn. Markaas waa marka aan bilaabay in aan ka fekaro cunnada, caafimaadka iyo jirka guud u fiican.”
Markaas waxay ahayd sannadkii 2015-kii. Jules, ayaa nolol walwal badan ku jirtay, waxayna deganayd magaalada London. Xilligaas waxay da’deedu ay aheyd 25 sano, waxayna ahayd markii laga helay xanuun mindhicirka ku dhaca.
Waxa ay bilowday inay qaadato dawooyin kaabayaal ah si ay isugu daydo inay u khafiifiso dhibaatada, hasayeeshee waxba uma aanay tarin.
Waxa ay sheegaysaa in dawooyinkaas qaarkood ay xaaladeedii uga sii dareen, waxa ayna ku baraarugtay in inta badan kaniiniyada ay isticmaashay ay walxo kale ka buuxeen. Wixii ugu horreeyay ee ay soo saartay waxaa loogu talagalay dejinta waxa dhibaya mandhicirada iyo caloosha.
Heerkaas markii uu xaalku gaaro, waxaa laga yaabaa in qaar badan oo inaga mid ah ay nolosha ka quustaan, walwal iyo xanaaqna ay isugu darsami lahaayeen. Balse Jules qorshe kale ayey laheyd – oo awoowgeed ayaa ahaa saynisyahan ka tirsanaa Jaamacadda Cambridge.
Iyada iyo awoowgeed – waa Prof George Miller-kii dhintay – waxa ay bilaabeen in ay baaraan cunnooyinka caafimaadka u wanaagsan iyo waxa laga samayn karayba.
“Waxay aheyd arrin aad u wayn,” ayey tiri Jules, oo haatan 31 sano jir ah. “Waxaa jiray alaabo ay shirkado soo saaraan oo aheyd inay ku caawiyaan, laakiin waxa ay ka koobnaayeen waxyaabo caafimaad ahaan la xaqiijiyay in calaamado kale ay soo saarayaan.”
Howsha ay iyada iyo awoowgeed qabteen, waxay Jules ka heshay dhiirigelinta ah in ay bilowdo ganacsiga cunooyiinka u fiican caafimaadka caloosha iyo dawooyiin. Sannadkii 2017-kii ayeyna bilowday Shirkadda Nue.
Maanta ganacsigaas waxay sannadkiiba ka heshaa lacag gaareysa illaa $10 milyan oo doolar. Juley ayaa sheegaysa in illaa iyo hadda, inta sanadkan lagu guda jiray ay lix jeer laabantay waxay gadaan markii la barbar dhigo 2019-kii, taas oo ay u aragto in dad badan oo caafimaadkooda ka walaacsan ay alaabahooda door bideen, xilli adduunku uu wajahayo fayraska safmarka ah ee korona.
Gabadhan oo qeyb ahaan ka soo jeedda Colombia, waxa ay ku dhalatay magaalada London, hasayeeshee qoyskeeda waxa ay u guureen Laatiin Ameerika iyadoo dhowr bilood jirta. Luuqadda Spanish-ka ayaa u ah midda koobaad. Waxa ay caasimadda UK ku soo laabatay iyada iyo waalidkeedba, markii ay 10 sano jirka ahayd. Shirkaddeeda waxay alaabta ku iibisaa si onlie ah, waxayna tukaan kale ku leedahay New York.
Falsafadda ayey ka baratay Jaamacadda Birmingham, ka hor inta aanay dhinaca xayeeysiinta London kaga biirin
Ka hor inta aanay daah-furin shirkadda Nue, waxa ay madax ka aheyd qeybta khudradda ee shirkadda Detox Kitchen. Markii ay dib u milicsatay xilligii ay bilaabaysay Nue, Jules waxa ay sheegeysaa in aysan wax cabsi ah ka qabin.
“Waxay ila tahay, haddii aan haatan bilaabo ganacsi kale, ma hayo kalsoonidii aan waagaas qabay,” ayey tiri. “Kalsooni badan ayaa iskuqabay. Waxaan qoray liiska waxyaabo aanan garanayn, iyo dadka waxyaabahaas yaqaan, markaas kaddib ayaan dadkii email u diray.”
Labada qof ee ay la xiriirtay waxa ay kala ahaayeen Natalie Massenet, oo ah haweeneyda leh shirkadda dharka farsamaysa ee Net-a-Porter, iyo Harvey Spevak, oo ah ninka madaxda ka ah shirkadda caafimaadka jirka ee Equinox. Nasiib wanaaga Jules labadoodaba way u soo jawaabeen, wayna la taliyeen. Dadka badankooda ma u baahan yihiin in fitamiino iyo dawooyiinka kale ee cuntada badala ay cunaan.
Bilowgii hore, wax soo saarka Nue waxaa loo bixiyay Debloat, oo ah kaabe khafiifiya xanuunka cudurka mindhicirka kaas oo Jules u shaqeeyey. Waxyaabo kale ayay markaas kaddib soo saartay, sida fitamiinnada, iyo mid dhawaantan ay soo saartay oo jirka lagu daweeyo.
Shirkadda waxaa markii hore saldhig u ahaa Cambridge, hasayeeshee sannadkii koobaadba waxa ay u rartay magaalada New York.
Jules waxa ay sheegaysaa in muhiimaddu ay aheyd in ay ka faa’iidaysato Mareykanka oo dhab ahaantii ah suuq wayn oo waxyaabahaas kaabayaasha ah lagu kala iibsado.
“Boqolkiiba 80% dadka Mareykanka waxa ay isticmaalaan fitamiinno iyo waxyaabo kale oo kaabayaal ah, balse dadka Britain arrintaas uma furfurna.”
Caalamka marka la fiiriyo ganacsiga waxyaabaha kaabayaasha ah aad ayey u socdaan, iyadoo warbixin sannadkii hore la soo saaray ay sheegayso in la filayo in sannadkiiba la gadi doono $210 bilyan, wixii loo gaaro 2026, tiradaas oo 2018 joogtay $125 bilyan.
Laga soo billaabo sannadkii 2017-kii, Nue waxay bilowday ganacsiga internet-ka oo lagu iibiyo wax soo saarkeeda, laakiin haatan alaabaha shirkaddaas waxaa iibiya dhowr tafaariiqlayaal ah, magaalada New York-na dukaan u gaar ah ayey ku leedahayba. Sannadkii la soo dhaafay, waxay shirkadda bilowday olole lagu wacyigelinayo arrimaha la xiriira caafimaadka maskaxda.
Ganacsigaas wuxuu hadda helaa illaa $11.5 milyan oo doolar oo maalgelin ah, oo ay ku jirto shirkadda wayn ee alaabaha ee Unilever, balse Jules iyo ninkeeda Charlie Gower ayaa saamiyada ugu wayn weli iska leh. Seygeeda ayaa ah madaxa howlgalinta shirkadda halka Jules ay tahay agaasimaha guud.
Croline Peyton, oo ah haweeney dhinaca nafaqeynta baratay oo British ah, waxa ay sheegaysaa in ay wanaagsan tahay in shirkaddu ay ka hadlayso waxa ay tahay in ay ku soo baxdo waxyaabaha ay soo saarto.
“Dad kooban ayaa garanaya waxyaabaha kaabayaasha ah ee ay u baahan yihiin halkii ay nafaqooyin la isku dardaray uun raadsan lahaayeen,” ayey tiri.
“Inay waxaas kala cad yihiin ayaa ah arrin u wanaagsan suuqa. Marwalba suuq ayey helayaan waxyaabaha raqiiska ah, hasayeeshee qaar ka mid ah dadka qiimaha ay bixinayaan waxa ay caddayn u tahay saafinimada waxa ay gadanayaan.”